Famantarana ny toetr’andro : mankalaza ny 115 taona ny Meteo Malagasy | NewsMada
Famantarana ny toetr’andro : mankalaza ny 115 taona ny Meteo Malagasy
Homarihina ny 23 marsa izao ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny famantarana ny toetr’andro. Hiara-dalana amin’izany ny fankalazana ny faha-115 taon’ny Meteo Malagasy izay hotanterahina any Fianarantsoa ny 24 sy 25 marsa izao.
Hisy ny fitokanana ny toerana famantarana ny toetr’andro any an-toerana. Hampidirina ao anatin’ny tambajotra maneran-tany ihany koa ny foiben’ny meteo manokan’ny Centre Valbio ao Ranomafana. Nahazo ny fankatoavana ity foibe mpamantatra ny toetr’andro ao ranomafana ity ka hampidirina ho isan’ny mpikambana matihanina.
Betsaka ireo orinasa vaventy manana ny foibe mpamantatra ny toetr’androny manokana. Tsy mana-penitra anefa ny sasany amin’izy ireny ary mampiasa ny fitaovana tsy manaraka ny fifanarahana iraisam-pirenena.
Manentana azy ireny ny Meteo Malagasy mba hiditra amin’ny sehatry ny matihanina ka hiditra ao anatin’ny tambajotra iraisam-pirenena hisian’ny fiaraha-miasa akaiky ka hahafahana manatsara hatrany ny tolotra ho an’ny Malagasy eo amin’ny vinavinan’ny mety toetr’andro.
Hitohy mandavataona ny fankalazana ny faha-115 taon’ny Meteo Malagasy. Haverina ny varavarana misokatra ny 4 ka hatramin’ny 9 avrily izao hahafahana mamantatra bebe kokoa ny asan’ny Meteo toy ny natao tamin’ny taon-dasa. Ankoatra ny fampirantiana, hisy ny adihevitra izay tsapa fa tena nahaliana tanteraka ny mpianatra eto an-dRenivohitra.
Iandraiketan’ny Dren Analamanga ny fandrindrana ny tetiandron’ny sekoly handray anjara amin’izany hetsika varavarana misokatra izany.
Ankoatra izay, harakitra anaty boky ny votoatin’ny Meteo Malagasy rehetra tao anatin’ny 100 taona lasa. Miisa 20.000 ny boky hatonta ary hahazo ny anjarany ny sekoly.